Yini ongayidla ngamantongomane aphezulu - isibuyekezo sezinhlobo eziyi-9 > Ukudla ngesifo sikashukela
Kungenzeka yini ukuthi udle amantongomane ane-cholesterol ephezulu
Udokotela naturopathologist, phytotherapist
Umuthi wanamuhla unikezela ngamathuluzi ahlukahlukene ukwehlisa i-cholesterol ephezulu, kepha anenani elikhulu lemiphumela emibi kanye ne-contraindication.
Phakathi kwezinto zemvelo ezifakazele ukusebenza kahle, amantongomane azibonakalise kahle. Ziyasebenza ngenxa yokuqukethwe kwamavithamini athile, amafutha emifino nezinto zomkhondo.
Kulesi sihloko, sizobheka izifundo zesayensi ezitholakalayo ezihlobene nemiphumela yamantongomane ahlukahlukene ku-cholesterol.
Ososayensi e-Institute of Endocrinology yaseSpain baphetha ngokuthi ukudla okune-nati kusiza i-cholesterol ephansi, kwandisa ukubumbana kodonga lwe-vascular (ukuncishiswa kwengcindezi ye-oxidative, ukuvuvukala nokuphinda usebenze), kunciphisa ingozi yokukhuluphala kanye nomfutho wegazi ophakeme.
Abantu abadla njalo amantongomane mancane amathuba okuba babe nesifo sikashukela sohlobo II (50%), isifo senhliziyo (30%).
I-Normalization ye-lipid metabolism ivimbela ukubekwa kwe-cholesterol ezindongeni zemithambo yegazi futhi kuyindlela eholayo yokuvimbela i-atherossteosis, okuholela ezinkingeni ezibangelwa yimithambo yegazi. Phakathi kwabathandi bokudla kwaseMedithera (ukusetshenziswa njalo kwe-15 g yama-walnuts, i-7.5 g yama-alimondi ne-7.5 g yama-hazelnuts ngosuku), ukuhlaselwa yisifo sohlangothi kanye nokushaya kwenhliziyo kuyizikhathi eziphindwe izikhathi ezi-2 no-3, ngokulandelana.
Ngokusho kososayensi be-Oxford, amantongomane enza kuphela i-cholesterol “embi” (LDL), ngaphandle kokukhulisa “okuhle” (lipoproteins enamandla amakhulu adonsela phansi).
Izakhi ezithile ekwakhekeni kwamantongomane (phytosterols, polyphenols, L-arginine, fiber, amaminerali, acid fatty acids) zinomphumela omuhle ohlelweni lwezinhliziyo nakuzo zonke izingxenye ze-metabolic syndrome (ukuncipha kokuzwa kwama-insulin receptors, ukukhuluphala, umfutho we-arterial hypertension, atherosclerosis), okukhona cishe ama-50% wabantu bomhlaba. Zonke izinto zalokhu “kutholwa” zibonakala zixhunyaniswe ngamacala angama-99%.
Udokotela, udokotela wenhliziyo. Udokotela wesigaba esiphakeme kunazo zonke.
Ngaphandle kokusebenza okufakazelwe kwamantongomane ekwehliseni i-cholesterol, kunconywa ukubonana nodokotela ngaphambi kokuwusebenzisa (ikakhulukazi isikhathi eside) ngenxa yobubanzi obuphakeme bokuphikisana.
Ama-Walnuts aqukethe amavithamini E amaningi, aqinisa imithambo yegazi, obhekene namandla nokuqina kodonga lwe-vascular. Bacebile ngama-phospholipids azuzisayo, anciphisa izinga le-cholesterol emzimbeni, futhi aqukethe ama-macro- nama-microelements amaningi, ama-acid acid.
Ukudla okucebiswe ngama-walnuts, ngokusho kososayensi, kusiza ukunciphisa i-cholesterol ephelele ne-low dopity lipoprotein ("embi" cholesterol) ngo-4,6% no-8% ngokulandelana.
Lo mkhiqizo futhi usiza ukwenza umzimba ube ngokwejwayelekile, wehlise umfutho wegazi futhi wehlise nengozi yezinkinga ezibangelwa ukwephulwa kwezakhiwo zegazi nezokulungiswa kwemithambo.
Ungathatha futhi uwoyela we-walnut.
Ama-alimondi angamantongomane anempilo kakhulu ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwamaprotheni, amafutha, i-fiber, novithamini E.
Ama-alimondi ama-Bitter acebile ngama-antioxidants anciphisa inqubo yokuguga futhi anciphise nobungozi be-proliferative pathologies engalungile.
Umphumela wama-alimondi kuphrofayili ye-lipid uqhathaniswa namalungiselelo wezokwelapha. Ukusetshenziswa komkhiqizo izinsuku ezi-6 kukhombise ukukhuphuka kokuhlushwa kwe-HDL “ewusizo” nge-14%.
Imiphumela enjalo itholwe ngabasebenzi bezikhungo zokucwaninga eNew Zealand nase-Australia. Baphinde bancome ukuthi udle ama-gramu ayi-10 wanoma imaphi amantongomane asebhulakufesi ukuvikela isifo senhliziyo.
Amantongomane acebile ngamavithamini anjengeK, B1, B2, kanye ne-calcium, i-magnesium, i-iron, phosphorus kanye ne-sodium.
I-Walnut i-normalization metabolism ye-lipid ngokususa "ngokweqile" i-cholesterol emzimbeni ngokusebenzisa ipheshana lesisu.
Amantongomane asiza ukuvimbela i-atherossteosis nezinguquko ze-fibrotic emithanjeni yemisipha yemithambo yegazi ngokumelene nesizinda se-hypertension. Vimbela ukuguga kwangaphambi kwesikhathi kanye nengozi yokuhlakulela isimila.
Amantongomane angadliwa aluhlaza noma atholisiwe.
Isenzo samaphinifa kaphayini siqinisekiswa yilezi zinto ezisebenzayo ezilandelayo:
ama-antioxidants (kunciphisa umphumela wama-radicals wamahhala ekusondeleni),
i-oleic acid (isiza ukususa amafutha amaningi emzimbeni),
i-gamma tocopherol (ivuselela imetabolism),
i-phytosterol (yenza kusebenze ama-insulin receptors kanye noshukela, kunciphisa ukujikeleza okunamafutha egazini, kusiza ukunciphisa ukukhuluphala).
Amantongomane wepine anothile ku-vithamini K, oqinisekisa ukusebenza kahle kwemisipha yenhliziyo futhi andise inani le-metabolic kuma-cardiomyocyte.
Ama-Hazelnuts awusizo kakhulu esibindini. Ngokusebenza kokusebenza kwe-enzymatic yesitho, ama-hazelnuts anciphisa i-cholesterol yamahhala (ngo-8%), i-TAG (ngo-7.3%) nezinhlayiya ze-lipoprotein enamandla aphansi athile (ngo-6%).
Le ndondo nayo inomthelela ekunyukeni kwama-lipids azuzisayo (HDL) ngo-6%. Le mininingwane ifakazelwe ngokwesayensi.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yemithamo emikhulu yamaprotheni abalulekile emzimbeni, i-iron ne-cobalt, ithuthukisa ukungazinzi futhi isiza ukuvikela izifo zokuphefumula zezinsiza zokuphefumula eziphezulu. Ihlanganisiwe kuma-pathologies wesibindi ezinzima ngokuntula okukhulu.
I-Cashew ifaka inani elikhulu lamavithamini we-B, i-nicotinic acid, i-calcium, i-zinc, i-sodium, i-selenium ne-manganese. Kusetshenziselwe ukulungisa isizinda se-hyperhypidemic. Umphumela uyefana namantongomane.
U-Cashew wenza ngokwejwayelekile umzimba wamaminerali emzimbeni kanye nomsebenzi wezindlala ze-parathyroid. Isiza ukuthuthukisa i-microcirculation ngemithambo ye-varicose yamaphethelo aphansi kanye nokuqothuka kwe-atherosclerosis.
Umsebenzi wososayensi abavela e-United States ukhombisile izimfanelo ezinhle zamasheya. Izifundo izinsuku ezingama-28, ngenkathi zigcina ukudla okujwayelekile, zazidla lolu hlobo lwamantongomane. Njengomphumela, kwehla inani eliphelele le-cholesterol ngo-3.9%, LDL - ngo-4.8%, kanye ne-TAG - ngo-5.1% kwaqoshwa.
Ososayensi batusa ukusebenzisa ama-cashews esikhundleni sokudla okulula phakathi kwemisebenzi yobungcweti. Umkhiqizo ukwanelisa ngokuphelele ukulamba, i-ejwayelekile i-metabolism futhi inciphise imvamisa yokuthuthuka kwama-pathologies ohlangothini lwenhliziyo nemithambo yegazi.
IMacadamia ingumthombo omuhle kakhulu wamafutha we-monounsaturated, angaphezulu kwe-15% kunowoyela we-olive. I-Walnut inikezela umsebenzi owanele wobuchopho ngokwandisa ukusetshenziswa nokulethwa komoya-mpilo, kanye nokwenza ngcono ukuhamba kwegazi.
Umphumela we-hypolipidemic awuzange ufundwe ngokuphelele futhi kungenzeka ukuthi uhlotshaniswa nokusebenza kwe-tyrosine kinase complexes ngaphakathi kwe-hepatocytes, enesibopho sokuguqulwa kwama-lipoprotein angavumelekile abe alusizo, ngaleyo ndlela iguqula inani lezingxenyana ezihlukile ze-lipid egazini.
Ngokusetshenziswa okuhleliwe okungenani kwama-40 g we-macadamia ngosuku, i-cholesterol ephelele incishiswa ngo-3%, i-atherogenic (imbi) - ngo-7%.
I-nut yaseBrazil inamafutha angama-70%, kepha noma kunjalo, ingaba nomthelela ezingeni le-lipids emzimbeni. Uma usebenzisa i-30 g ngosuku, kuyehla ukwehla kwe-TAG ne-LDL ngama-8%.
Ukwakheka kuqukethe i-iron ne-magnesium eningi, egcina ithoni yodonga lwe-vascular futhi kunciphise izehlakalo ze-hypertension ebalulekile.
I-Nutmeg iyakwazi ukukhulisa ukuzwela kwe-insulin receptor complexes ukuze ifakwe i-insulin futhi inciphise noshukela wegazi.
Lesi simo, kanye nokwenza kusebenze ama-enzymes “we-lipid-lowering” esibindini, sivumela ukuvimbela i-atherosulinosis yemikhumbi emikhulu futhi kuvumele ukujwabuzwa kwama-lipoprotein emzimbeni.
I-Nutmeg iqukethe izinto ze-narcotic ezenzo zazo zifana ne-amphetamine. Ngomqondo ngokweqile, ama-hallucinations, umuzwa we-euphoria, ukwanda kwesilinganiso senhliziyo kungakhula.
Ubuningi bezakhamzimba benza ukuthi amantongomane abe umkhiqizo owaziwa kakhulu emazweni athuthukile (ngokwesibonelo, e-USA). Kodwa-ke, zinobunzima obuningi. Imiphumela emibi ifaka phakathi:
Isisindo esisheshayo. Okuqukethwe kwekhalori okuyi-100 g yanoma yiluphi uhlobo lwamantongomane kusuka ku-500 kuye ku-700 kilocalories. Lapho kufakwa ngisho namanani amancane ekudleni okujwayelekile, kunengozi enkulu yokukhuluphala.
Ukucindezelwa komsebenzi wokusebenza kwesibindi. Isenzo sisuselwa enanini elikhulu lamafutha zemifino namafutha aqukethe amantongomane, okuvimbela umsebenzi we-hepatocytes futhi kuvuse ukuthuthukiswa kokuwohloka kwamafutha. Umcimbi ubonwa ngokudla okuhleliwe okungaphezu kwama-250 g ngosuku.
Ukuthuthukiswa kokuphendula komzimba. Cishe wonke umhlali we-15 weplanethi une-hypersensitivity eyodwa. Imvamisa, ukuphambuka kutholakala ezweni elihola ekusetshenzisweni kwebhotela lamantongomane - e-United States.
Yehla ezintweni zokuvikela ukungasebenzi zasendaweni (endaweni yokuxhumana). Kufakazelwa ukuthi izingane, okuthi amantongomane azo ayisisekelo sokudla kwazo, maningi amathuba okuba ne-tonsillitis ne-SARS.
Ukuvinjwa kwe-motility esiswini. Yiba neqhaza ekuthuthukisweni kokuqunjelwa kanye ne-bowel syndrome. Isenzo sisuselwa ekuvinjelweni kwama-receptor synthes membrane we-mucous, ngenxa yokuthi udonga lwamathumbu luyekela "ukuzizwa" i-chyme nezinto eziyinqaba, bese icishiwe.
Ngakho-ke, inani le-contraindication ngokuphelele lifaka:
Ukukhuluphala Kutholakala nenkomba yesisindo somzimba ngenhla kwe-30 noma ngesinqe esinqeni esingaphezulu kwama-88 cm kwabesifazane, i-102 cm emadodeni.
Izifo ezisuka esibindini ngokuntula okukhulu (i-cirrhosis, i-hepatosis, i-congestive plethora).
Izilonda ezivuvukala ezisesitayeleni se-gastrointestinal ipheshana noma ukwanda kwe-pathologies engapheli.
Ukuphazamiseka kwesistimu yezinzwa ephakathi ne-arousal syndrome.
Ukuzwela kuzakhi ngazinye.
Ukuqunjelwa kwe-Atonic (ukuntuleka kwesitulo izinsuku ezingaphezu kwezingu-3).
Ukuhlukunyezwa kwe-immunosuppression (ukutheleleka nge-HIV).
Yini amantongomane alungele?
Kubandakanya ama-acid amaningi we-polyunsaturated fatty acid, anciphisa ubungozi bokukhula kwe-atherosclerosis kanye ne-senile dementia. Ukudla amantongomane ne-cholesterol ephezulu kuphephile futhi kuyazuzisa. Basiza ukuhlanza imithambo yegazi futhi banciphise izinga lama-lipoprotein ayingozi. Aqukethe amaprotheni, inani lama-amino acid kanye ne-fiber, ejwayelekile i-lipid metabolism. Vele, izitshalo zama-nati zicetshiswa ngenani elikhulu lamafutha - aze afike ku-50%. Kepha njengoba lezi zihlanganisi zivela ezitshalweni, ama-lipid ngeke afakwe ezindongeni zemithambo yegazi. Ngo-2003, ososayensi baveza ukuthi amagremu ama-30 wamantongomane, ama-alimondi noma olunye uhlobo oluhlukile anganciphisa amathuba okuba nezifo zemithambo yegazi.
Ukusetshenziswa ngokulingana kwamantongomane kwenza ukuba sikwazi ukubuyisa amandla futhi kwanelise indlala yeziguli ekudleni okuphansi kwekhalori. Ukukhuluphala okuvame ukudala ukwanda kokusebenza, futhi ngokusebenzisa lo mkhiqizo ungalahlekelwa isisindo ngokuthola amavithamini ekudleni. Noma imaphi amantongomane anciphisa i-cholesterol, kodwa kufanelekile ukubhekisisa ukuthi yikuphi amanye athinta i-biochemistry yegazi. Kunconywa ukuhlanganisa izinhlobo ezahlukene, ngoba ziyahlukahluka phakathi kwazo ngezakhiwo, okuqukethwe kwekhalori nokwakheka kwamakhemikhali. Izinzuzo zomzimba ziyabonakala uma usebenzisa izinhlobo ezihlukile, ngakho-ke ungaba nomphumela oqondile ohlelweni oluthile lomzimba.
Izinhlobo zamantongomane neCholesterol
Kunezinhlobo eziningi zalezi zipho zemvelo zokuphilisa, ngisho nokhukhunathi kuthiwa wenziwa ngamantongomane. Uma umuntu enezinkinga zenhliziyo noma ama-plaque emithanjeni yegazi, akuzona zonke izinhlobo ezizokhombisa ukusebenza kahle kakhulu, kepha ngeke kulimaze impilo yakhe. Ukuphela kokwephulwa komthetho kungaba ukuphela kokuphendula. Embuzweni wokuthi amantongomane akhulisa okuqukethwe kwama-lipoprotein nokuthi kungenzeka yini ukukudla nge-cholesterol ephezulu, kunikezwe impendulo ende. Njengazo zonke ezinye izinhlobo, alikhulisi izinga, kepha umkhiqizo kufanele udliwe ngokuya ngemithamo enconyiwe.
Bahlukaniswa ngokuqukethwe okuphezulu kakhulu kwama-acids e-polyunsaturated aze afike ku-74%. Isici esibonakalayo isilinganiso esifanelekile se-Omega-6 no-Omega-3 kumkhiqizo - 4: 1. Ngenxa yalokhu, lezi zinhlobonhlobo zidonswa kangcono ngumzimba kunabanye. I-asidi yokuqala ye-polyunsaturated isebenza izivikela zomzimba, okuvusa ukukhula kwenqubo yokuvuvukala. U-Omega-3, kunalokho, uyeka ukuvuvukala. Kuyaqapheleka ukuthi ama-walnuts ne-cholesterol awahambelani, umkhiqizo wesitshalo awunangozi ngokuphelele. Ngesikhathi esifanayo, inomphumela we-choleretic futhi inomphumela omuhle enhliziyweni.
I-Vitamin E, i-macro kanye nama-micronutrients nayo inikela ekwehleni kwezinkomba.. Ama-phospholipids athinta i-metabolism yamafutha ezingeni lamaselula, anciphisa ukumuncwa kwama-lipoprotein ayingozi futhi athuthukise ukwakheka kwalawo anenzuzo. Ngenxa yalokhu, amathuba wokuhlaselwa yinhliziyo nemivimbo ancishiswe kakhulu. Uma usebenzisa ama-walnuts aluhlaza noma uwoyela, ungafinyelela ukwehla kokuqukethwe komzimba ngamaphesenti ayi-10.
Ngokucwaninga kososayensi abavela eSpain, amantongomane anciphisa okuqukethwe yi-lipoprotein ngamaphesenti ayi-7. Lokhu kusho ukuthi hhayi kuphela inani lamakhompiyutha ayingozi afakwe ezindongeni zemithambo yegazi ancishisiwe, kodwa futhi namanye alusizo. Kunombono oyiphutha wokuthi amantongomane ane-cholesterol ephezulu adala ukwakheka kwama-plaque futhi angazuzi lutho. Eqinisweni, ukufafazwa kuphela ngosawoti noma ushukela kuyingozi.
I-Walnut ingasetjenziswa ukuvikela i-atherossteosis, ekuleso simo kungcono ukungayishisi ukuze kugcinwe umsoco omkhulu. Inani elithile i-niacin nama-phytosterols. Lezi zingxube ziyaphazamisa ukumuncwa kwama-lipids ayingozi; ngenxa yalokho, umkhiqizo ukhuthaza ukuqothula kwezinhlayiya ezihlanganisa. Kuyaqapheleka ukuthi le Delicacy inenkomba ye-glycemic ephansi, ngakho-ke ayiholeli ekwenyukeni koshukela wegazi.
Kumuntu odla njalo amantongomane ephayini, i-cholesterol ayigxili, kepha iyancipha. Bangumthombo we-Vitamin K, obhekele ukuqina kwegazi ne-oleic acid, uhlobo lwamafutha angama-monounsaturated alawula ukukhiqizwa kwama-lipoprotein. Futhi aqukethe ama-phytosterols ne-gamma-tocopherol adingekayo ekunciphiseni isisindo, obuyisela uhlelo lwethambo nenhliziyo. Ngenxa yama-antioxidants ekwakhiweni, ama-radicals wamahhala awathathi hlangothi.
Ama-alimondi, ama-hazelnuts kanye nama-cashews
Ezinye iziguli azikwazi ukudla izinhlobo ngazinye ngenxa yokunambitheka kwazo okuthile. Kwenzeka ukuthi umuntu angayeki ama-hazelnuts, futhi amantongomane wepine nge-cholesterol ampofu awabekezelelwa kahle. Njengoba kungekho mafutha ezilwane ekwakhekeni kwezithelo eziqoqwe ezihlahleni noma ezihlahleni, noma yikuphi ukuhlukahluka kuvunyelwe ukufakwa ekudleni. Ama-Hazelnuts ahlanze izitsha ezivalekile kahle, yenza isibindi sijwayelekile, sisusa amadiphozithi ayingozi emzimbeni. Umphumela omuhle emasosheni omzimba nezinqubo ze-metabolic kwaphawulwa.
Amafutha e-almond namantongomane avela ku-cholesterol ayisizi ngaphansi kwezinye izinhlobo, okufakazelwe ososayensi abaningi. Ngokuqukethwe kwamavithamini, i-fiber nezinye izinto ezisebenzayo zokulandela umkhondo, akukuhle. Kepha imiphumela emihle kakhulu itholakala ekudleni okuhlukahlukene komuntu, kufaka phakathi eminye imikhiqizo ethuthukisa ukumbiwa kwama-lipoprotein.Kunconywa abantu abane-cholesterol ephezulu ukuhlanganisa ama-alimondi nama-oatmeal, izithelo ezintsha nemifino. Ngokuqondene nama-cashews, anenani eliphakeme kakhulu lamafutha ahlanganisa ukwakheka kwamadiphozithi anamafutha. Ngakho-ke, amantongomane walezi zinhlobonhlobo akavamile ukufakwa kwimenyu ye-ejer. Umthamo kufanele ube ngaphansi kunasesimweni sezinhlobo eziphakeme kakhulu zamakhalori.
Ungadliwa ngamantongomane e-cholesterol ephezulu
Ama-Hazelnuts angahlanganiswa noju nezithelo ezomisiwe, njengama-apricots omisiwe. Amasheya kanye nama-alimondi kwesinye isikhathi kudliwa kanye ne-muesli noma i-oatmeal, kuthuthukisa umphumela wokuphulukisa. Kepha akuhlali kufanelekile ukudla amantongomane alukhuni ngezinto ezingavuthiwe; abantu asebekhulile kakhulu ngeke bakwazi ukubabhoboza. Ukulungiselela izithelo zemvelo akunzima nhlobo, ngokwesibonelo, kukhona indlela elula yokupheka ibhotela lamantongomane. Kuyinto elula ukwengeza okusanhlamvu, amasaladi bese usakaza kumasemishi.
Cwecwa amantongomane, usike izikhwebu ngommese.
Gaya izikhwebu ezichotshoziwe gazinga lenyama. Ukuze ungalimazi amabala esisetshenziswa, kunconywa ukufaka amaconsi ambalwa kawoyela yemifino esitsheni.
Beka isisindo somhlabathi ku-cheesecloth bese uthambisa. Thela uketshezi oluvuthiwe ebhodleleni elimnyama bese ugcine esiqandisini. Impilo yeshelf - ayisekho izinyanga ezintathu.
Udinga ukuthatha uwoyela izikhathi ezi-3 ngosuku, isipuni esisodwa ngaphambi kokudla. Umthamo ophelele ngamagremu angama-50 ngosuku.
Ithuluzi elisebenzayo lokuvimbela i-atherossteosis lilungiselelwe ngesisekelo sobisi. Okokuqala udinga ukuxuba amagremu ayi-100 wezikhwebu zomhlabathi ezinamawele namawashi amathathu egalikhi. Ngemuva kwalokho uthele izingilazi ezimbili zobisi bese ubeka eshalofini elimnyama ukugcizelela. Ngemuva kwamahora amabili, hlela kabusha isitsha esiqandisini. Thatha le ngxube eqediwe izikhathi ezi-3 ngosuku, isipuni esisodwa. Inkambo yokwelashwa iqala ezinyangeni ezintathu kuya kwezintathu.
TOP 7 amantongomane anempilo kakhulu: Izakhi zomsoco zomzimba.
Amafutha e-asidi angagcwalisiwe futhi egcwele
Nsuku zonke, umuntu kufanele athole emikhiqizweni yokudla kusuka kumagremu angama-80.0 kuya kwama-90.0 amagremu wamafutha.
Nge-cholesterol eyandayo, kuyadingeka ukunciphisa umkhawulo wokusetshenziswa kwamafutha ezilwane futhi unxephezele ukungabikho kwayo ngosizo lwamafutha acid abalulekile aqukethwe emafutheni emifino.
Zonke izinhlobo zamantongomane nazo ziqukethe la ma-asidi, ayingxenye yeklasi le-Omega-6 acid tata. I-Walnut iqukethe i-omega-3 acid tata.
Ngokwesibalo sama-acid anamafutha, isikhundla esiholayo sihlalwa yi-walnut nama-pecans - okuqukethwe okungamafutha kuzo kungaphezu kwama-gramu angama-65.0 ngegremu 100.0 yomkhiqizo.
Ukusuka kwamafutha acid ezithweni zomzimba, kwakhiwa izinto ezinjengokuthi kubalulekile ekusebenzeni kahle kwezitho nezinhlelo:
Into yesistimu ye-Thromboxane hematopoietic,
Ama-Prostaglandins athinta ukulawulwa kokuncipha kwe-choroid nokukhula kwayo, okulawula ukuhamba kwegazi futhi kulungisa umfutho wegazi kuyo, kanye nenqubo yokunamathela kwe-platelet clots to the arterial endothelium.
I-Thromboxanes inyusa inqubo yokuqunjelwa kwegazi, futhi iphazamise ukusebenza kohlelo lwe-heestatic, ngenxa yokuhlanganiswa kwalesi sakhi kumamolekyuli eplatelet. Ama-Thromboxanes akhuthaza ukunamathela kwamangqamuzana.
Ama-leukotrienes emzimbeni alawula izimpendulo zomzimba nezinqubo zokuvuvukala.
Ngaphandle kwenani elidingekayo lama-acid acid, ayingxenye ye-Omega-3 ne-Omega-6, umzimba womuntu ngeke ukwazi ukuthuthuka ngokuphelele futhi zonke izinqubo ezibalulekile zizovinjelwa kuwo.
Ama-acid angenawo umzimba ngesikhathi sokudla anama-cholesterol aphezulu anomthelela onjalo ku-lipid metabolism kanye nohlelo lokujikeleza kwegazi:
Umphumela wehlayo engxenyeni ye-cholesterol ye-LDL,
Kunokwehla kwama-molecule we-triglyceride,
Isenzo se-asidi sandisa ingxenyana ye-cholesterol ye-HDL,
Ukuchithwa kwegazi kuncibilike - ukuchitheka kwegazi,
Yehlisa ukuvuvukala egazini nasemzimbeni,
Amafutha e-asidi angavumelekile ayindlela enhle yokuvimbela i-pathology yesifo sikashukela, izifo zesitho senhliziyo kanye ne-systemic pathologies.
Zonke izinhlobo zamantongomane nazo ziqukethe la ma-asidi, ayingxenye yeklasi le-Omega-6 acid tata.kokuqukethwe ↑
Ama-Walnut kernels anomzimba olinganiselayo wamavithamini, osiza ngokuntuleka kwamavithamini, kanye nokubuyisa umzimba ngemuva kokugula obekuphele isikhathi eside futhi kubi kakhulu.
Izihlakala zamantongomane ziwusizo ekwakhekeni nasekukhuleni komzimba wengane, kanye nasekusebenzeni kahle kwazo zonke izitho kubantu abadala:
Vitamin A kanye ne-beta carotene kubaluleke kakhulu ekusebenzeni okufanele kwesitho esibonakalayo, ekuhlanganiseni kwama-hormone ocansi ngamaseli we-adrenal gland. Ngokushoda kwe-Vitamin A, ukukhula kwamaseli emzimbeni kanye nokuhlanganiswa kwama-enzymes ama-hormone kumisiwe,
Vitamin E Ivumela ukumukelwa ngokuphelele kwamamolekyuli e-calcium ne-carotene ngumzimba. I-Tocopherol isiza ukwehlisa inkomba ye-cholesterol ye-plasma. Amavithamini A no-H avela ngokwemvelo ama-antioxidants avikela ama-nut kernels kusuka ku-oxidation wamafutha acid kanye nokuvela kokuqina kwamakhaza,
Vitamin H (biotin) ilawula ukuvela kwama-molecule wamafutha esiteji sokuqala,
Vitamin C ikhuthaza ukutholwa okungcono kwama-acid acid ngumzimba, okuthinta kahle ukulingana kwe-lipid,
Vitamin B1 - ivuselela ukusebenza kwamaseli obuchopho futhi isebenze umsebenzi wokuqonda. IVithamini B1 ithuthukisa ikhwalithi yememori futhi ivimbele ukuthuthukiswa kokuwohloka komqondo kanye ne-sclerosis, iphinde ibuyise amaseli e-myocardial futhi ikhuphule ukuzithemba kwayo,
Vitamin B3 - Ibuyisela ukulingana kwe-lipid futhi yehlise i-cholesterol ngobuncane be-molecule. IVitamin PP idlala indima ebonakalayo ekwakhekeni kwe-enzyme, enomphumela we-vasodilating kulwelwesi lwasekhaya, olusiza ukwandisa ijubane lokuhamba kwegazi. Le ndlela enhle yokuvikela i-atherosulinosis e-systemic kanye ne-pathologies yesitho senhliziyo,
Vitamin B6 - isiza ukwehlisa inkomba ye-cholesterol, futhi futhi isusa ama-molecule we-lipid ekwakhiweni kwamaseli wesibindi.
Ama-Walnut kernels ane-Vitamin tatakokuqukethwe ↑
Kuhlanganiswe nama-nut kernels ngamavithamini, ama-microelements nama-macroelements ayabanjwa ayakwazi ukugcina ukusebenza okujwayelekile kwesitho senhliziyo kanye nohlelo lokuhamba kwegazi:
I-Magnesium ilawula ama-molecule we-cholesterol emzimbeni, futhi isiza ukwandisa ingxenyana ye-cholesterol enhle, ngokunciphisa ingxenyana yama-lipids ayingozi, futhi inomphumela omuhle kwimicu yemisipha kanye ne-nerve. I-Magnesium ithinta isimo se-arotial endothelium. Ngokuya ngezakhiwo zayo zokwelapha maqondana nomphumela wamamolekyuli e-cholesterol, i-magnesium iqhathaniswa nezidakamizwa zeqembu lama-statin. Inani elikhulu kakhulu le-magnesium kumantongomane e-cashew kanye nama-alimondi,
I-phosphorus isebenzisa amaseli obuchopho, okwandisa amandla okuqonda omzimba, kanye nokuqapha komuntu futhi kuthuthukisa ikhwalithi yememori yakhe. I-phosphorus ikuphikisa ngenkuthalo ukuthuthukiswa kwama-brain pathologies, kanye ne-pathology of dementia - dementia,
Isakhi se-iron nosawoti we-cobalt kuthinta uhlelo lwe-hematopoiesis, yandisa ukwakheka kwama-molecule we-hemoglobin futhi kuthinte ibhalansi ye-erythrocyte. ICobalt iyingxenye yevithamini B12. I-Iron ivimbela ukuthuthukiswa kwe-anemia yokuntuleka kwe-iron, futhi i-cobalt ivimbela i-anemia ye-megaloblastic anemia,
I-Potassium ekwakhekeni kwama-kernels wamantongomane ithuthukisa ukwakheka nokusebenza kwe-myocardium yenhliziyo futhi inesibalo sokulingana kwamanzi. I-Potassium inethonya lokugaya emzimbeni, okuthi, nangamanzi amaningi ngaphakathi komzimba, asize ukuyisusa ngesikhathi esifanele. IPotassium isiza ukuqeda ama-cholesterol plaque emikhunjini futhi ayilethe ngaphandle komzimba,
Ama-Walnuts ane-iodine element track, okudingekile ekusebenzeni okufanele kwe-gland yegilo.
Ama-Walnuts ane-iodine element trackkokuqukethwe ↑
Kuma-alimondi ababayo, amantongomane, kanye nazo zonke izinhlobo zama-hazelnuts, ukwakheka kuqukethe isakhi se-choline, esinomphumela we-lipotropic emzimbeni:
Isusa amakhompiyutha amaningi ngokweqile kumaseli wesibindi,
Ibuyisela ukulingana kwe-carbohydrate emzimbeni,
Iphikisana nokuthuthukiswa kokopha kwangaphakathi,
Inomphumela omuhle kwimicu yezinzwa.
I-ampinogine ye-amino acid ibuye isebenze emgudwini wemicu yezinzwa, ikunikeze ukuqina namandla.
Cishe zonke izinhlobo zamantongomane zinesakhi se-lipase.
I-Lipase iyakwazi ukugaya ngokushesha ama-fatty compounds, esiza ukwehlisa inkomba ye-cholesterol, kanye nokufakwa kwe-100.0% ngomzimba wamavithamini A no-E, namavithamini K noD.
Izakhi ze-tannic ekwakhekeni kwama-nati kernels ziqinisa ulwelwesi lwe-arterial egazini, futhi zibuye zithuthukise nesimo se-endothelium.
I-Fiber ibopha ama-molecule e-cholesterol ngama-asidi ac futhi isiza ukuphuma emzimbeni ngokushesha. Ngosizo lwefayibha, umsebenzi wayo yonke iminyango nemisebenzi yamathumbu iyathuthuka.
Ukwakheka kwazo zonke izinhlobo zamantongomane kufaka phakathi i-computer phytosterol, enezindawo ezinama-lipid aphezulu esisindo semisipha, ihlanza ukuphuma kwegazi kusuka ku-cholesterol yamahhala futhi inciphise nengozi ye-cardiological and systemic pathologies.
I-Phytosterol isiza ukuguqula ukulingana kwe-lipid emzimbeni.
Ngingakwazi ukudla amantongomane nge-cholesterol ephezulu?
Nginkomba ye-cholesterol ephezulu, amagremu angama-50.0 wama-nut kernels kufanele afakwe ekudleni kwansuku zonke. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukuthola izinyanga ezintathu kwamantongomane, i-cholesterol index yehle ngo-10,0%.
Nge-cholesterol, amantongomane kufanele asetshenziswe njenge-snack, futhi anezelwe okusanhlamvu (i-oatmeal ngamantongomane kuyasebenziseka ekudleni kwasekuseni), futhi futhi kusetshenziselwe ukwenza amasoseji nokugqokwa kwesaladi ngokuhlangana nemikhiqizo yobisi.
Ungakhohlwa ukuthi amantongomane anokuqukethwe kwekhalori ephezulu, ngakho-ke, iziguli ezikhuluphele kakhulu kufanele zinciphise ukusetshenziswa kwamantongomane - 20,0 - 30.0 amagremu ngosuku.
Nginkomba ye-cholesterol ephezulu, kuyasiza ukusebenzisa amakhambi we-walnut ngaphandle kokwelashwa okushisa - okuluhlaza ngoba aqukethe inani elikhulu lezithako ezisebenzayo.
Kuyanconywa nokuthi uthenge amantongomane ama-inshell, ngoba kuwo ama-acid amaningi awahlangani namangqamuzana omoya futhi awafakwa i-oxidation.
Ukwakheka, izinzuzo zazo kanye nokulimaza umzimba
Izinkomba ezingezansi zingahluka ngokuya ngobusha nohlobo lwamantongomane:
amavithamini wamaqembu B, E no-C,
manganese, phosphorus, calcium, potassium, ithusi, i-iron, i-zinc, i-sodium.
Futhi aqukethe ama-organic acid asiza kakhulu ukugaya.
Umphumela wokudla amantongomane anempilo kakhulu.
Ngokuvamile, amantongomane anomthelela omuhle kakhulu emzimbeni womuntu. Yilezi:
Yehlisa i-cholesterol ephezulu futhi unciphise ukuminyana.
Zivimbela ukukhula kwesifo senhliziyo, ukuwohloka komqondo.
Gqugquzela izicubu zemisipha, futhi futhi kuthinte kahle ukukhula komzimba.
Shukumisa umsebenzi wobuchopho.
Zisekela izindawo zokuhlanza kwesibindi, futhi futhi zenze nokujwayelekile iphethini lokugaya.
Iqiniso elithandekayo! Ezikhathini zasendulo, abantu abavamile babenqatshelwa ukudla amantongomane, ngoba bekholelwa ukuthi bazoba ngobunono futhi bafuna ukushintsha isikhundla sabo emphakathini.
Uma umuntu ene-allergy ebangelwa amantongomane, ukuqubuka kungavela esikhunjeni. Uma uthatha lolu hlobo lomkhiqizo umthamo omkhulu, khona-ke i-edema ye-laryngeal kungenzeka, ngenxa yalokho umuntu angafa.
Kuhle ukukhumbula amaphuzu amaningi:
uma amantongomane engezwa ezinhlanzini, ezitsheni zenyama, kumakhekhe, khona-ke umthwalo osemzimbeni ukhuphuka kakhulu,
uma amantongomane ephuziwe, athinta kabi amaseli wesibindi,
Akunconywa ukunikeza lo mkhiqizo ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-5 ubudala, njengoba amantongomane amuncwa kakhulu emzimbeni wezingane.
Iqiniso elithandekayo! Ngokusetshenziswa kwansuku zonke kwamantongomane ngowesifazane okhulelwe ngobuningi, amathuba okuzala umntwana asthmatic anda kaningana.
I-Omega 3 kumantongomane
Ama-Omega-3s 'abalulekile' acid acid, njengoba umzimba awukwazi ukuzisebenza wedwa. Kulokhu, umuntu udinga ukudla ukudla okuqukethe i-omega-3 element. Lokhu kuyadingeka ukuze kwenziwe ukuntuleka kwayo emzimbeni.
le nto ivimba ukwakheka kwama-cholesterol plaque ezindongeni zemithambo yegazi,
ilawula izinga lamafutha.
Imikhiqizo equkethe le nto:
Ama-Hazelnuts - 0,07 mg.
Ama-Walnuts - 7 mg.
Amantongomane egazi Cholesterol
Ama-Hazelnuts, ama-alimondi, amakhethini, amantongomane, kanye nama-walnuts, umsedari, iBrazil ngamantongomane angadliwa nge-cholesterol ephezulu.
Indawo yokuqala ekulweni ne-cholesterol ihlalwa ngama-walnuts. Ezingeni layo eliphakeme, adingeka kakhulu, okokuqala, ngenxa yokuqukethwe kwe-omega-3 fatty acid.
Ngaphezu kwalokho, lawa amantongomane aqukethe ezinye izinto eziwusizo umzimba odinga kakhulu:
Phospholipids. Zithinta ukwehliswa kwe-cholesterol, ehlala ezindongeni zemithambo yegazi futhi yakha izingqimba eziphazamisa ukuhamba kwegazi.
I-Sitosterol. Le nto inciphisa izinga lokufakwa kwamafutha emgodini wokugaya ukudla.
Ngokusetshenziswa njalo kwalolu hlobo lomkhiqizo, i-cholesterol incishiswa ibe ngu-10%. Vele, kungcono ukudla okusanhlamvu okuluhlaza.
Abantu abane-cholesterol ephezulu kufanele badle ama-almond kernels nsuku zonke. Isikhathi sonke sokuphathwa okunjalo sithatha izinyanga ezintathu. Ngalesi sikhathi, i-LDL incishiswa yaba ngu-15%. Kuyafaneleka ukubheka ukuthi kwifomu eluhlaza lo mkhiqizo unobuthi, kepha ngemuva kokulashwa okushisa kubaluleke kakhulu emzimbeni.
Ama-alimondi anciphisa ubungozi bokukhiqizwa kwe-cholesterol plaque, futhi futhi kusiza ukwehlisa isisindo (uma umthamo ubonwa). Ngaphezu kwalokho, la makhaza asiza ukususa ama-radicals ayingozi kanye nobuthi emzimbeni.
Ngokusebenzisa nsuku zonke amagremu ayi-15 kuye kwangama-25 alawa makhinathi, ungazivumelanisa ngokuphelele izinqubo ze-lipid kungakapheli izinyanga ezimbalwa (kwesinye isikhathi kungathatha izinyanga eziyisithupha), uma nje kungekho ezinye izidakamizwa ezithathwa. Ngemithi yendabuko, yiqiniso, izikhathi ezikhonjisiwe zincishisiwe ngokubonakalayo.
Amantongomane ephayin acebile nge-asidi egcwele i-monooleic acid. Lokhu kusho ukuthi umkhiqizo uvimbela ukumiswa kokuqala kwamafutha odongeni lomkhumbi, i.e. kugcwala ungqimba lwangaphakathi lwamithambo, imithambo yegazi, kanye nama-capillaries. Ngenxa yalokhu, amanoni awanalutho 'lokunamathela'.
Vele, singasho ukuthi okusanhlamvu kucebile kwezinye izinto.
Lawa amantongomane anciphisa i-cholesterol, aqinise ama-capillaries, enza umfutho wegazi ube ngokwejwayelekile. Ngaphezu kwalokho, ngokusetshenziswa okusanhlamvu okuvamile, ungafinyelela imiphumela efana nale:
Ukuqiniswa kwe-metabolism emzimbeni womuntu.
Ukwenza ngcono isibindi, ukuhlanza kanye nokwenza kube lula ukusebenza kwawo.
Ukuhlanza, kanye nokukhuthaza amathumbu.
Ukususwa kobuthi egazini.
Ama-Hazelnuts awathathi hlangothi kakhulu kuwo wonke amantongomane, ngakho-ke ayingxenye yezindlela eziningi zokupheka zemithi yendabuko noma zokupheka ezisolisayo, kufaka phakathi lezo eziklanyelwe ukwehlisa i-cholesterol.
UCashew, amantongomane neBrazil
Kuyasiza futhi ukwethula ama-cashews, amantongomane, amantongomane aseBrazil ekudleni kwakho - yonke le mikhiqizo ivimbela ukufakwa kwamafutha ayingozi, futhi futhi kuyisuse ngokwemvelo.
I-Cashew nayo iqukethe yethusi, engase yehlise izinga le-LDL. Ziwusizo kakhulu ekusebenzeni okuzinzile kokushaya kwenhliziyo, lithuthukisa ukuqina kwemithambo yegazi.
Ukukhetha nokusebenzisa abanekhono
Lezi zithelo zilungele kahle ukudla okulula okungelula njengesithasiselo ku-yogurt noma iphalishi. Kwesinye isikhathi amantongomane aba yingxenye esemqoka yesoso.Ngokuhambisana nezithelo ezomile, ulamula, uju, azigcini ngokunciphisa kakhulu i-cholesterol, kodwa futhi zithuthukisa nokugomeka.
Kodwa-ke, kufanelekile ukukhumbula ukuthi amantongomane aqukethe amakhalori amaningi, futhi ukuze angazitholi amaphawundi awengeziwe, odokotela batusa ukungadli izithelo ezingaphezu kuka-50 ngosuku.
Lokhu kufanele kubukeke njenge-walnut yekhwalithi entsha.
Nge-cholesterol ephezulu, amantongomane adliwayo angalungiswa, njengoba ngaphansi kwethonya lokushisa, zonke izinto eziwusizo ziyalahleka.
izithelo ezimnyama nalezo zomunyu,
imbewu okufakwa kuyo izengezo ezahlukahlukene.
Akunconywa ukuthi udle izibiliboco ezahlukahlukene ku-glaze, njengoba izithelo ezonakele zingaba ngaphansi kokuhlanganiswa.
Lapho ukhetha ukuthi imaphi amantongomane angadliwa nge-cholesterol ephezulu, izinhlobo ezihlukile kufanele zivikeleke, njengoba ukuqinisekisa ukuphepha kwabo, izithelo zingaphathwa ngezinto ezikhethekile eziyingozi kakhulu empilweni yomuntu nasempilweni.
Kuhle ukuthenga amantongomane egobolondweni. Ukuze ubone ukuthi zingakanani izithelo eziphambi kwakho eziphambi kwakho, kufanele zifakwe emanzini ubusuku bonke. Emva kwalokho, susa umnyombo bese usonga ngendwangu encibilikisiwe. Umkhiqizo wekhwalithi uzohluma ngezinsuku ezimbalwa.
Intengo evunyelwe Yomkhiqizo Weviki
Ukuthola okuningi kumkhiqizo, yidla amagremu ayi-15 kuye kwangama-30 nsuku zonke zamantongomane, kepha hhayi ngaphezulu. Kulokhu, ungadla noma yiluphi uhlobo, ngokwesibonelo, ama-walnuts, ama-alimondi, amantongomane, amakhethini, njll. Abanye ochwepheshe baze baluleke ukwenza ukuxubana kwamantongomane. Yiwo umthamo owanele ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi, wandise ukuqina, futhi uqinise nemisipha yenhliziyo.
Njengomthetho, uma amantongomane eyingxenye yemenyu yokwelashwa, lapho-ke kufanele abekhona ekudleni kwansuku zonke kweziguli ngqo kunani elibekwe ngumondli. Lapho ekhetha umthamo, udokotela ubheka ukubukeka kwesiguli, ukuphambana, nokunganakwa kwalesi sifo kanye nesimo saso esivamile.
Ngokudla okwenzelwe ukuvimbela izifo ezihambisana nezinkinga zokwanda kwe-cholesterol, lo mkhiqizo akufanele udliwe izikhathi ezingaphezu kwezi-4 ngesonto.
Amantongomane - lokhu kuyinqolobane yangempela yamavithamini, egcina izakhiwo zayo ezizuzisayo isikhathi eside kungakhathalekile ukuthi isikhathi sonyaka sithini. Kodwa-ke, ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngezipho zemvelo, kufanele uthintane nodokotela.
Ingabe ama-walnuts ayilungele i-cholesterol?
Noma ngubani oye wabhekana nezinkinga ngezinga lakhe eliphakeme uyazi ukuthi ama-walnuts ne-cholesterol ahlobene kanjani.
Kubaluleke kakhulu ukwehlisa izinga lale nto emzimbeni: i-cholesterol ephezulu ingadala ukuphazamiseka okukhulu (ukuphefumula, ukugula ikhanda) kanye nokuba yi-harbinger yezifo ezimbi kakhulu.
izifo zesibindi nezinso
ukuhlaselwa yinhliziyo nemivimbo,
Kungakho izindlela eziningi zokupheka zemithi yendabuko zinikelelwa ekulweni nezinga layo elikhuphukile. Phakathi kwazo, kukhona ezanele lezo ngokususelwa kuzo amantongomane okuyikhambi elihle kakhulu le-cholesterol.
Amantongomane ne-Cholesterol ephezulu
Amantongomane ane-cholesterol ephezulu yizinto zokuqala zokungezela ekudleni. Amafutha ama-monounsaturated, agcwele ngawo, i-cholesterol ephansi, kanye nefayibha engaphansi kwawo. Ngaphezu kwalokho, amantongomane nokuphuma kwawo kuqukethe ezinye izinto eziningi ezisebenzayo, zimane nje zibalulekile ngesikhathi sokudla okuncane kwabantu abanendaba nesibalo.
Ezinye izinhlobo zamantongomane
Ngaphezu kwalokho, izinzuzo ezinkulu kakhulu ekulweni ne-cholesterol zingaletha:
ezinye izinhlobo zamantongomane zikaphayini,
Kodwa-ke, kunezinhlobo eziningana zamantongomane okungafanele adliwe kaningi ngabantu abahlushwa i-cholesterol ephezulu:
ezinye izinhlobo zemisedari.
Lokhu kungenxa yokuqukethwe kwabo kwamafutha aphezulu.
Kepha uma uzifaka ekudleni ngokucophelela nangezinga elincane, khona-ke zingaba wusizo.
Okunye ukudla okwehlisa cholesterol
Kuyiqiniso, hhayi nje amantongomane anciphisa cholesterol ephezulu.
Ngokungeziwe kubo, ungaguqula izinga lale nto egazini ngokungeza eminye imikhiqizo ekudleni kwakho:
Imifino Izihlobo Imbewu yelanga Izinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle Ezinye izinhlobo zemikhiqizo
Iklabishi emhlophe Ilayisi lasendle I-Flaxseed AmaSardines I-Avocado
Izaqathi Oats Imbewu yethanga Salimoni Amafutha omnqumo
I-Garlic kanye nokuphuma kwayo Ibhali Amafutha enhlanzi Imifino nemifino enamahlamvu
Utamatisi Millet Ulwandle kale Ama-cranberry nama-Blueberries
I-Legumes I-Rye Tea
I-Asparagus Millet I-Lime iyaqhuma futhi ama-decoctions ayo
Isitshalo seqanda Uju nokutholwa kwalo
Ukuqinisekisa ukuthi yonke le mikhiqizo iletha izinzuzo ezinkulu, kubalulekile ukulandela imithetho embalwa ebalulekile:
Amasaladi kufanele ayoliswe ngamafutha (umnqumo ungcono kakhulu). I-Sour cream noma imayonnaise ayikwazi ukusetshenziswa.
Yize iqiniso lokuthi ezinye izinhlobo zembewu zinganciphisa i-cholesterol, kufanele zithathwe ngokuqapha - lolu uhlobo lokudla olunamakhorali aphezulu kakhulu, futhi kubantu abanendaba nesibalo, ngeke lusebenze.
Izitsha zenhlanzi, ngaphezu kokwehlisa i-cholesterol, nazo zinganciphisa ukubukeka kwegazi - kepha inqobo nje uma zidliwe esitsheni esibhakiwe, abilisiwe noma esitshiwe. Inhlanzi ethosiwe ayisenempilo.
Kukhona okunye ukudla okungukuthi, kunalokho, kungakhuphula i-cholesterol.
Kufanele zigwenywe ngabantu abanezinkinga:
inyama nokudla okulungiselelwe ngesisekelo saso,
imikhiqizo yobisi enamafutha,
Uma zonke lezi zimo zihlangabezana, ungaqiniseka ukuthi ukuncipha kwe-cholesterol kuzokwenzeka.
Izici zoshintsho ekudleni
Imvamisa, amazinga e-cholesterol akhuphuka ngokumangazayo adinga ushintsho olukhulu esimweni sokudla.
Ngaphandle kokuthi kubonakala kulula kakhulu - udinga nje ukwazi ukuthi yimiphi imikhiqizo ongayikhetha - empeleni, udinga ukukhumbula amaphuzu ambalwa abalulekile:
Amantongomane namajikijolo kufanele kufakwe ngokucophelela okukhulu ekudleni ezinganeni ezincane (kuze kube seminyakeni engu-3). Kulesi minyaka, noma yimuphi umkhiqizo ongaziwa, obonakala ngenani eliphakeme lezinto ezisebenzayo, ungaba yi-allergen enzima.
Ngomkhiqizo ngamunye, kuyadingeka ukuthola ukuphambana kwawo kwezifo ezithile kanye nesikhathi esiphezulu esivumelekile senkathi yokusebenzisa - ngokwesibonelo, isilinganiso esilinganiselwe ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside kakhulu singadala ukwehla okukhulu kombono.
Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kufanele kuboniswane nodokotela - imvamisa bangaxabana nemithi ethile ebekelwe ukulwa ne-cholesterol nezinye izifo ezihambisana nayo.
Amantongomane sekudliwa isikhathi eside ngabantu njengomthombo wemvelo onamandla. Kuyinani labo eliphakeme lamandla elisanda kwenza ukungabaza okukodwa - ingabe balusizo ngempela? Bathi ungathola ngcono kumantongomane, ngakho-ke kungcono ukungazidli. Ngakho ingabe amantongomane ayingozi noma aphilile? Futhi ahlanganiswa kanjani amantongomane ne-cholesterol?
Namuhla, kuvela izinhlobo eziningi zamantongomane emashalofini ezitolo. Zihluke ngokwanele komunye nomunye ekunambithekeni nasekwakheni kwawo.
Ukwakheka nokuqukethwe kwekhalori kwamantongomane
Uma sikhuluma ngokuqukethwe kwekhalori yamantongomane, khona-ke kufanele sivumelane - amantongomane anekhalori ephezulu, anenani lama-carbohydrate namafutha, okuqinisekiswa yithebula:
Walnut, 100 g Ama-carbohydrate, g Amaprotheni, g Amafutha, g Okuqukethwe kwekhalori, kcal
Amantongomane 9,9 26,3 45,2 551
Ama-Hazelnuts 9,4 15,0 61,2 651
Walnut 7,0 15,2 65,2 654
Coconut 4,8 3,9 36,5 364
I-Pine nati 19,7 11,6 61,0 673
I-Pistachios 7,0 20,0 50,0 556
Pecan 4,3 9,2 72,0 691
UCashew 13,2 25,7 54,1 643
Ama-alimondi 13,0 18,6 53,7 609
Njengoba ubona, ukwakheka kwamantongomane kwehluke kakhulu, kepha asenamafutha amaningi. Kufanele kuqashelwe ukuthi amafutha akhona kumantongomane avela emifino, okusho ukuthi, awunakwenza lutho ngamafutha ezilwane, okuwumthombo we-cholesterol embi. Ngakho-ke, akukho cholesterol kumantongomane. Kepha kuzo kunezinto eziningi eziwusizo.
Ngisho noHippocrates, obhekwa njengoyifanele njengobaba wezokwelapha zesimanje, ukhulume kakhulu ngenhlonipho ngezakhi ezinzuzisayo zam nati futhi wazibona zibalulekile ezifweni zesibindi, izinso nesisu. Cishe kuyo yonke imifino yezwe, amantongomane akhona, futhi abantu bayayikhokha ukunambitheka kwabo nempilo.
Wonke amantongomane acebile emafutheni aphilile, amaprotheni anokugaya kalula, amavithamini, amaminerali nama-amino acid.
Ama-Walnuts aqukethe inani elikhulu lamavithamini kanye namaminerali. I-Walnut phakathi kwezizwe eziningi iyingxenye yezitsha ezahlukahlukene, ngenxa yokunambitheka kwayo kanye nokudla kwayo. Siyathanda - kungenzeka yini ukudla ama-walnuts nge-cholesterol ephezulu? Uma sibala uhlu lwezinzuzo zama-walnuts, sithola uhlu olulandelayo:
Bandisa ukungatheleleki, kunconywa ikakhulukazi esikhathini sekwindla-nobusika nangemva kwezifo.
Qukethe i-iron, i-zinc, i-cobalt, iodine. Nikela ekwandeni kwamazinga we-hemoglobin.
Amavithamini A no-E aqukethe kuma-walnuts athuthukisa ukusebenza kwezitho zangaphakathi, aqinise izindonga zemithambo yegazi.
Amaprotheni ajwayelekile ipheshana lesisu.
I-Metabolism isheshisiwe, umsebenzi wobuchopho uyasebenza, inkumbulo yathuthukiswa.
Ama-Walnuts asiza ukubhekana nezimo zama-neurotic nezokuxineka.
Ama-infusions aqhamuka egobolondweni nasezingxenyeni (kepha hhayi umnyombo) ushukela wegazi ophansi.
Zinamanani amaningi e-omega-3 fatty acids, atholakala futhi ezinhlanzini, ngokwesibonelo, i-tuna noma i-salmon. Amafutha e-asidi angavumelekile angawehlisa i-cholesterol. Umphumela onenzuzo wama-walnuts ku-cholesterol kudala waziwa, kepha awucwaningwanga kangako. Kodwa-ke, umkhuba ukhombisa ukuthi ukusetshenziswa njalo kwama-walnuts emithanjeni emincane kuholela ekunciphiseni i-cholesterol yegazi.
Kunabantu abakhonjwe ngemvume yokusebenzisa ama-walnuts noma anconyelwe ukuwasebenzisa ngokuqapha. Contraindication:
I-eczema, i-psoriasis, i-neurodermatitis.
Kumele kuqashelwe ukuthi kuphela izidakamizwa zamazinyo ezisezingeni eliphezulu. Uma i-nati yenziwe mnyama noma iqukethe isikhunta, khona-ke ngeke nje ibe yingenelo kuphela, kodwa futhi ingadala ubuthi, ngoba kukhiqizwa i-enzyme enobuthi emantongolweni anjalo.
Ama-alimondi ezikhathini zasendulo ayebhekwa njengophawu lwenjabulo yomshado, ukuzala nokuchuma. Kunezinhlobo ezimbili zama-alimondi - amnandi futhi anomunyu. Ama-alimondi ama-Bitter ngaphandle kokwelashwa okushisayo anobuthi. Sekudliwe ama-alimondi amnandi. Izici zayo ezisebenzayo:
Ngenxa yamavithamini we-B, ama-alimondi enza ngokwezifiso amandla we-metabolism emzimbeni futhi abe neqhaza ekusebenzeni okufanele kohlelo lwezinzwa. Ama-alimondi asekela izinwele ezinempilo, izipikili nesikhumba.
IVitamin E ivikela amaseli ekugugeni, ivimbela ukukhula kwezifo eziningi, kubandakanya i-atherosclerosis. Ukuvimbela ukwakheka kwe-cholesterol ye-plaque ezindongeni zemithambo yegazi, amantongomane anjalo nge-cholesterol ephezulu anenzuzo kuphela.
I-calcium, phosphorus, magnesium, potassium, iron - zonke lezi zinto zibalulekile ekusebenzeni kwazo zonke izinhlelo zomzimba.
Amafutha kuma-alimondi amelelwa ikakhulukazi ngamafutha angenawo amandla, amunzwa kahle futhi anenzuzo emzimbeni.
Ama-alimondi aqukethe inani lerekhodi lamaprotheni anokugaya kalula.
Ukudla ama-alimondi okungenani kabili ngesonto kunciphisa ubungozi bokuhlaselwa yinhliziyo nemivimbo. Ama-alimondi awusizo ekwelapheni i-anemia, isilonda se-peptic, kuyasiza ukususa ubuthi kanye nobuthi emzimbeni, buhlanze. Eminyakeni eminingana eyedlule, umagazini weSolezwe ushicilele imibiko yocwaningo lukaDkt D. Jenkins. Imiphumela yocwaningo ingendlela elandelayo - kubantu ababedla kancane ama-alimondi nsuku zonke izinyanga ezintathu, amazinga e-cholesterol ehle cishe ngo-10%. Lokhu kuphinde kufakazele ukuthi amantongomane anempilo eyi-cholesterol anjani. Ama-alimondi, ngeshwa, abuye abe ne-contraindication - lokhu kungukuphamba komzimba kanye nesisindo ngokweqile.
Ama-Hazelnuts abizwa nangokuthi yinyama yemifino, ngenxa yokuthi ngokubaluleka kwamaprotheni aqhathaniswa nenyama ngempela. Ukwakheka kwama-hazelnuts, njengamanye amantongomane, kuqukethe:
Amafutha, aqukethe ikakhulukazi ama-polyunsaturated fatty acids. Lezi ngama-oleic, i-linoleic, i-Palmitic, i-myristic ne-stearic acid. Lezi zinto, ezibalulekile emzimbeni, kunzima ukuzithola ngobuningi obunjalo kweminye imikhiqizo.
I-Paclitaxel yi-ejenti elwa nomdlavuza elwa namaseli womdlavuza emzimbeni.
Izinzuzo zama hazelnuts zomzimba kade zaziwa, ubukhulu abubanzi:
Ukwelashwa kwesifo senhliziyo,
Siza ngemithambo ye-varicose, thrombophlebitis,
Amanye amantongomane. Sesivele sabona ukuthi ngenxa yokufana kokuqanjwa kwayo, noma imaphi amantongomane kuya kwelinye izinga noma kwelinye anezici ezifanayo, kungaba ngamantongomane zikaphayini noma amantongomane, ama-cashews noma amakhethini. Amantongomane awayikhulisi i-cholesterol, kodwa kunalokho yehlise.
Amantongomane awuthinta kanjani umzimba
Ucwaningo oluningi emazweni ahlukene, olwenziwe eminyakeni yamuva, lufakazele ngokukholisayo ukuthi amantongomane athathwa njalo kwimithamo emincane (i-1-2 handfuls) anegalelo ekwehlisweni okukhulu kwe-cholesterol.
Yini amantongomane aphansi? Yebo, cishe konke. Kepha kuhamba kanjani lokhu? Ukusebenza komphumela wamantongomane ku-cholesterol akuqondakali ngokuphelele, kodwa kuyaqhubeka nokuba yindaba yocwaningo olwengeziwe. Ososayensi baphakamisa ukuthi ngenxa yento ebizwa ngokuthi i-phytosterol equkethwe emikhondweni wamantongomane emzimbeni, inqubo yokufakwa kwe-cholesterol emibi ivinjiwe.
Ukuthi kunjalo noma cha akukacaci. Kepha namhlanje, umuthi uncoma ukuthi abantu abane-cholesterol ephezulu baqiniseke ukuthi bafaka amantongomane ekudleni kwabo. Akukhulunywa ngamantongomane kushukela glaze noma amantongomane usawoti (obhiya). Sikhuluma ngamantongomane angempela, abanye ochwepheshe abancoma ngisho nokuwabamba emanzini isikhashana ngaphambi kokudla (okuthiwa kusebenze izinqubo ze-biological kumantongomane). Futhi, yiqiniso, la amantongomane akufanele onakaliswe, ngakho-ke udinga ukukhetha amantongomane afanele.
Ungayikhetha futhi uyidle kanjani amantongomane
Amantongomane anempilo kakhulu aluhlaza futhi ayigobolondo. Igobolondo livikela futhi livikele nati ngendlela efana nezikhali. Ungathengi amantongomane athosiwe. Uma amantongomane evela emazweni akude, akunakucatshangwa ukuthi awacutshungulwa nganoma iyiphi indlela. Isibonelo, iBrazil nati ayingeneli iRussia ngokuvamile ngendlela yayo eluhlaza; ifakwa ekwelashweni kokushisa ukuze igweme ukulimala.
Ukubheka ikhwalithi yamantongomane athengiwe, udinga, ngemuva kokuhlanza izingcezu ezimbalwa, ubashiye izinsuku eziningana ngendwangu emanzi, ukugeza ngezikhathi ezithile. Uma i-nati ingaqali ukumila - ifile futhi, ngenxa yalokho, ayinamsebenzi.
Ngaphambi kokudla amantongomane, ngokuvamile kuyasiza ukuzifaka emanzini amahora amaningi, ziba nempilo futhi inempilo.
Nge-cholesterol ephezulu, amantongomane amasha abukhoma ngamanani amancane, noma ngabe hlobo luni, alusizo. Udinga ukuzisebenzisa ngokucophelela futhi njalo. Kulokhu kuphela ozozuzisa wena futhi uthuthukise impilo yakho.
Ama-Walnuts ukwehlisa i-cholesterol ephezulu
Ukwakheka nezakhiwo ezizuzisayo zamantongomane
Iziphakamiso Zokudla nokunempilo
Izeluleko Zomdabu Womdabu
Ukwanda kwe-cholesterol kukhombisa ukungasebenzi kahle kumetabolism yamafutha. Iqhaza elibalulekile ekuvinjelweni nasekwelapheni ukugxilwa kwe-overestimated kwento kudlala ushintsho ohlelweni lokudla okunempilo. Uma ukhulisa imenyu yansuku zonke ngemikhiqizo ethile, isimo somzimba sizobuyela kokujwayelekile.
Izazi zezempilo ziphawula umphumela omuhle wamantongomane ekwakhiweni kwegazi okune-biochemical. Kwanele ukudla ama-walnuts nsuku zonke ngenyanga - futhi i-cholesterol izohlala ingaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile okungenani izinyanga eziyisithupha.
Yini amantongomane aphansi? Izinhlobo eziningi zomkhiqizo zilungele ukudla: ama-walnuts, amantongomane, ama-hazelnuts, ama-pistachios, ama-pecans, umsedari, ama-alimondi, ama-macadamia, ama-cashews, amaBrazil.
Zonke izinhlobo zibonakala zenani lamandla abalulekile nokuqukethwe kwamaprotheni aphezulu. Kodwa-ke, amafutha atholakalayo ezitsheni aqhamuka ezitshalweni. Ngakho-ke, labo abangabazayo ukuthi ngabe kukhona i-cholesterol kumantongomane, awukwazi ukwesaba imiphumela yako elimazayo.
Ukwakheka kwamantongomane kwenza ama-kernel abe yingxenye ebaluleke kakhulu ekudleni kwama-imifino nanoma ngubani ofuna ukugcina kugxilwe i-cholesterol efanele.
Ama-Walnuts ayinkimbinkimbi yangempela ye-multivitamin. Basheshisa imetabolism, bathuthukisa umsebenzi wobuchopho nememori. Izithelo zinomthelela ekunqobeni ukuphazamiseka kwe-neurotic kanye nokucindezela. Umkhiqizo ucebile ngezinto ezilusizo ezibalulekile kumuntu ngamunye.
Lapho i-cholesterol igcotshwe kakhulu, ukuntuleka kwamafutha acid kubuyiswa ngamafutha avela ezintweni zokwakha. Amantongomane aqukethe amaningi ama-omega-6 nama-omega-3 fatty acids.
Uhlelo lokudla olugcwele lezi zinto luthinta kahle umzimba:
Ukuhlushwa kwe-cholesterol eyingozi kuyancishiswa,
Ingcindezi yegazi yenziwe kahle,
Ukuvuvukala okuhlukahlukene kuyeka
Ukwakheka kwamachibi cholesterol kuvinjelwe,
Izigaxa zegazi ziyasuswa
Ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela nezifo ze-vascular system kanye nenhliziyo kuyavinjelwa.
Ama-Nut kernels anconyelwa ukusweleka kwevithamini kanye nokusekela umzimba ngesikhathi sokululama ekuguleni. Okuqukethe:
IVithamini A ne-carotene, okuvusa ukukhula, kube nomphumela onenzuzo embonweni, ekudalweni kwama-enzymes nokwakheka kwama-hormone,
Vitamin E, ekhuthaza ukumuncwa kwe-carotene,
Amavithamini we-B, asetshenziselwa umthethonqubo we-metabolism kanye nemood, enza okwejwayelekile i-hemoglobin futhi
Ukubuyiselwa kokusebenza kwesibindi,
IVithamini PP, enomphumela we-vasodilating,
Vitamin H, obhekele ukwakhiwa kwamafutha acid,
Vitamin C, immune immune.
Ngokuhambisana namavithamini kusuka kumantongomane, amaminerali abalulekile ayabanjwa:
I-Magnesium, ekhulisa ingcindezi futhi inyuse ukuqina kwemithambo yegazi. Ngenxa yale nto, bazokwehlisa ama-cashews abo nama-alimondi ne-cholesterol, futhi bazothuthukisa umsebenzi wesistimu yezinzwa,
Ama-cores anconyelwa ukuntuleka kwe-iron ne-cobalt. Ziyadingeka ekwakhekeni kwe-hemoglobin kanye nokwenza kusebenze kwama-enzymes akhuthaza inqubo ye-hematopoiesis,
IPotassium ilawula ukulingana kwamanzi emzimbeni,
Iodine, obhekele indlala yegilo.
Ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-tannin, amantongomane, ama-hazelnuts nama-alimondi avela ku-cholesterol asiza kahle. Umuthi ukhipha amafutha ngokweqile esibindini, ulawula i-carbohydrate metabolism, uvimbele ukopha, futhi uthuthukise ukusebenza kwemicu yezinzwa.
Phakathi kwezithako ezizuzisayo zamantongomane:
Ama-Enzymes athuthukisa ukumuncwa kwamafutha acid namavithamini,
I-fiber, ethuthukisa ukusebenza kwamathumbu futhi ikhiphe i-cholesterol emzimbeni,
Ama-tannins akhulisa amandla we-membrane yemithambo yegazi.
Izithelo ze-walnut zilungele kahle njengemifungo, njengesengezo kuphalishi noma yoghurt, njengesithako ku-usoso. In Inhlanganisela noju, ulamula nezithelo ezomisiwe hhayi nje i-cholesterol ephansi, kodwa futhi kuqinisa amasosha omzimba.
Kodwa-ke, kubalulekile ukucubungula ukuthi amantongomane angukudla okunekhalori ephezulu, futhi ukuze ungazitholi amakhilogremu angeziwe, izazi zezempilo zeluleka ukuthi uzikhawulele kuma-50 amagremu ezithelo ngosuku.
Amantongomane ane-cholesterol ephakeme adliwe kangcono ngendlela engafinyeleleki, ngoba ngaphansi kokuthonywa amazinga okushisa izinto ezinenzuzo kuzo ziyachithwa.
Kuyenqatshelwe ngokuphelele ukudla izithelo:
Igcwele izithuthukisi zokunambitha, ukunambitheka nezinye izithasiselo.
Izibiliboco ku-glaze ngeke zilethe umphumela obekulindelwe, ngoba izithelo ezonakalisiwe kwesinye isikhathi zifihla ngaphansi kokufaka okuhlanganayo.
Lapho ukhetha ukuthi imaphi amantongomane anciphisa i-cholesterol yegazi, kungcono ukugwema izinhlobo ezingafani nalutho, ngoba ukuqinisekisa ukuphepha kwawo nokwethulwa ngemuva kokulethwa ezindaweni ezikude, izithelo zingalashwa ngemithi elondolozayo eyingozi empilweni.
Kungcono ukuthenga amantongomane egobolondweni. Ukunquma ukuphinda kwabo, kufanele ubeke izithelo emanzini ebusuku. Lapho-ke amakhubalo adinga ukuhlanzwa futhi asongwe ngendwangu encibilikisiwe. Izithelo ezisezingeni zizokhipha ihlumela ezinsukwini ezimbalwa.
Amantongomane e-cholesterol awanconyelwe:
Ukusuka kumakhambi e-walnut, ungenza i-balm ukuvimbela nokuphulukiswa kwe-atherossteosis. Izikhombo zidinga ukugoqwa esitsheni sengilazi uthele ngoju olugelezayo. Izitsha zivaliwe ngokuqinile futhi zigcizelelwa izinsuku ezingama-90 egumbini elipholile. Ngemuva kwalokho umkhiqizo wezinyosi uyakhanywa bese uhlanganiswa nesipuni sempova yezimbali. Thatha ukwakheka okuvela ngaphambi kokudla.
Garlic ne-walnut kusiza i-cholesterol ephansi. Ukwenza ingxube yokuphulukisa, gaya ama-wal angu-100 g we-walnuts kanye nama-5 clove wegalikhi ku-blender. Ngemuva kokuthela uthele izinkomishi ezi-2 zobisi olubiliswe kancane bese ugcizelela ihora. Sebenzisa i-tincture kufanele kube isipuni kathathu ngosuku, esiswini esingenalutho amasonto ama-2.
Amantongomane ne-cholesterol yegazi kungancipha futhi kube ngumthombo wamandla anamandla womzimba. Bakhona kuzo zonke izindlela zeplanethi. Uma uzisebenzisa njalo nangesilinganiso esifanele, ungayithuthukisa kakhulu impilo nekhwalithi yempilo.